Afovoany Atsinanana: Veloma mandrakizay ry Saramago · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 01 Jolay 2010 8:39 GMT
Vakio amin'ny teny македонски, عربي, Español, srpski, Português, 繁體中文, 简体中文, English
Misaona sy mitomany ny fahafatesan'ilay mpanoratra Portiogey Jose Saramago ireo mpitoraka blaogy any Moyen-Orient – ilay hany tokana miteny Portioge nahazo loka Nobel ho an'ny Literatiora, izay manana ny fomba ny ara-pivavahana sy ny ara-politika azy manokana tsy takatry ny maro. Taitra tamin'ny fahalasanany daholo ny olona rehetra tany amin'ny tontolo miteny Portioge [Lusosphere] ary tsy ambaka an'izany ny tontolo arabo.
Yazan Ashqar no namoaka ity sarin'i Saramago ity tao amin'ny blaoginy ary nanoratra iray amin'ireo fanamarihana malazany hoe: Raisko ho toy ny jamba isika. Jamba mahiratra. Vahoaka jamba afaka mahita, saingy tsy mahita. http://dajeej.wordpress.com/2010/06/19/%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%BA%D9%88/
Ilay Ejiptiana mpitoraka blaogy, Badawiaa, dia nanoratra ao amin'ny blaoginy momba ny fanaovam-beloma farany an'i Saramago amin'ity fiainana ity:
Tao anatin'ny kabariny nandritry ny fahazoany ny loka Nobel, niresaka momba ny fahazazany sy ny fahatsiarovany fodimandrin'ny raibeny i Saramago: “Nankeo an-jarizainan'ny tranony izy. Nisy hazo maromaro sy kirihitra teo, aviavy sy hazon'oliva. Noteteziny tsirairay ireo hazo, fihininy sy tolorany veloma tsirairay. Fantany fa tsy ho afaka ny hahita azy ireo intsony izy. Raha toe-javatra toy izany no tsy hamela dindo ao anaty fanahinao mandritry nandrom-piainanao, dia efa olona fo vato ianao izany.”
Ary tonga izao ny andro izay anjaran'i Saramago indray ny mamihina ny hazony manokana sy manoraka azy ireny ho faraveloma.
Ilay Libaney mpitoraka blaogy Jihad Bazzi dia nanontany tena ny amin'ny toerana mety hisy an'i Saramago amin'izao fotoana any amin'ny fianan-tsy hita misy azy any:
لقد مات الكاتب إذاً..
Lasa ilay mpanoratra…
Niverina amin'izay nahaterahany izy ankehitriny, mamisavisa sy mitazana. Inoana fa hanoratra momba izay tsinjony eny izy – na any am-paradisa izy na any amin'ny helo. Angamba any amin'izay heveriko no misy azy ankehitriny. Any amin'izay toerana nandrian'ny fony aorian'ny fodiamandry izy, ilay tontolo lafatra any rehetra any.
Ankoatry ny maha-mpanoratra azy dia manana ny fironany ara-politika azy manokana koa i Saramago. Izany no nahatonga an'i Yassin El Suwayheh, Siriana iray mpitoraka blaogy, monina any Espana, hanoratra momba ny fironana ara-politika manokan'i Saramago ao amin'ny blaoginy Spanish waves on Levant shores:
رحل رجلٌ يكفي لوصفه أنّ أقلّ ما يمكن أن يقال عنه أنه حائز على كبرى جوائز الأدب و الرواية و الشعر, و منها جائزة نوبل.. إن جوائزه الحقيقة كانت بشجاعته في تشريح الظلم و الطغيان, في تحدّيه و طعنه.. في دفعه و الدفاع عن ضحاياه.
رحل الحالم المناضل من أجل عالمٍ أفضل, أكثر عدلاً.. أكثر منطقياً
Maty ny lehilahy iray, izay azo fantarina fara-faharatsiny amin'ireo loka lehibe azony tamin'ny literatiora sy ny tononkalo, ary isan'ireny ny loka Nobel ho an'ny literatiora.
Fa ny tena loka lehibeny dia ny herimpony tamin'ny fijoroana nanohitra ny tsy rariny sy ny jadona. Sy ny fanohanana ireo izay nianjadian'ireny rafitra ireny.
Ny fahatsiarovantsika hibanjina mandrakariva ireo teniny sy izay nijoroany. Iray tamin'ireny ny fitenenany tamin'ireo nanohitra ny fananiham-bohitra tany Irak. Nijoro ilay lahiantitra eo amin'ny valopolo taona eo ho eo ka niteny: ” Misy hery goavana matanjaka roa eto amin'izao tontolo izao: Etazonian'i Amerika sy Ianareo.”
Ilay mpanonofy nitolona hisian'ny tontolo tsaratsara kokoa, tontolo iray ahitàna ny rariny bebe kokoa sy ny fahaiza-mandinika, dia lasa nandao antsika ankehitriny.
Mpamaky iray tsy mitonona anarana no nametraka fanamarihana ao amin'ny lahatsoratr'i Yassin. Nifantoka tamina fehezanteny iray ilay mpamaky, “Maty ny lehilahy iray, izay azo fantarina fara-faharatsiny amin'ireo loka lehibe azony tamin'ny literatiora sy ny tononkalo” sady nanoratra fa izay atao sy soratan'ireny olo-malaza ireny no hanamarihana an-dry zareo fa tsy izay loka azony akory:
يعني الجوائز ماهي إلا هامش بحياة الكبار, يعني هي شغلة بيفكر العالم انو عمل الي عليه بس يعطين جايزة قال!
Sombin-javatra ihany eo amin'ny fiainan'ny olo-maventy toy ireny ny loka. Sahala amin'ny hoe hany làlana azon'izao tontolo izao hialana ny henatra manoloana azy ireny ihany iny ka omena azy ireo ny loka toy izany mba hahazoana anaina amin'izay zavatra voatery tsy maintsy hataon'izy ireo. Sahala amin'ny hoe miandry fankatoavana toy izany ery ireny olo-malaza ireny.
Etsy ankilany, Ahmed Shawky dia nanahy fa ny fijoroana ara-politikan'i Saramago, dia mety hitarika ny olona handray ny fijeriny ho toy ny mpanoratra mpamorona.
Veloma ho an'ny rain'ny literationa Portioge. Fantatro fa tsy maintsy hiresaka momba ny fironana ara-politika nanananao ry zareo ato ho ato, ary mandritra izany resaka izany dia ho adinon-dry zareo ny ny foto-kevidehibe tokana sy manangana avy aminao§. Veloma ry Jose Saramago.
Maro amin'ireo avara-pianarana Arabo no mahalala momba an'i Jose Saramago, na nandre ny aminy. Indrisy anefa fa maro no tokony hisaotra amin'ny fahafatesany tamin'ny nitarihany azy ireny ho mpanoratra tahaka azy koa. Ahmed El Mueini dia nanoratra ao anatin'ny blaoginy momba ny Blindness, tantara noforonin'i Saramago, sy ny fomba nahazoany azy ity ho isan'ny tahirim-bokiny nefa tsy mba nanana fotoana namakiana azy velively:
اشتُهر ساراماغو بروايته “العمى” الصادرة عام 1995، والتي ترجمها إلى العربية محمد حبيب وصدرت عن دار المدى. كما عُرف أيضًا بكتابه المثير للجدل “إنجيل عيسى المسيح” والذي اضطر بسببه إلى الرحيل عن البرتغال والإقامة في جزر الكناري.
Nanjary nalaza be i Saramago noho ilay tantara nosoratany, “Blindness“, izay natonta tamin'ny 1995, ary nadikan'i “Muhammad Habib” ho amin'ny teny Arabo tato aoriana kely, ary avy eo natontan'i “Dar El Mada” avy eo. Nalaza ihany koa izy tamin'ilay bokiny, “The Gospel According to Jesus Christ“, izay isan'ny antony nialany an'i Portugal sy nandaniany ny andro sisa niainany tany amin'ny Nosy Canary .
Indrisy tsy dia nahavaky firy amin'izay avy amin'i Saramago aho, ary dia mahita mandrakariva ilay tantara “Blindness” nosoratany eo amin'ny tahirin-bokiko ka antenaiko fa hisy fotoana mba hamakiako azy atsy ho atsy.
Avy eo i Omani Wadhha AlBusaidi nanao fanamarihana tamin'ny lahatsoratr'i Ahmed El Mueini:
اول مرة اسمع عنه ، وان دل على شيء فإنما هو يدل عن جهلي بالأدب العالمي
Hotahian'Andriamanitra anie ny fanahiny.
Voalohany nandrenesana ny aminy izao, ary dia manaporofo ny maha-taraiky ahy izany raha vao literatiora manerantany no resahana.
Mpitondra fanamarihana hafa indray no namaly ka nilaza famalahelo ny tsy hahita intsony ny asa soratr'i Saramago izy, eny fa na dia tsy miombon-kevitra amin'ny fomba fijeriny ny ara-pivavahana aza izy:
لا شك أننا سنفقد فيه روايته العظيمة وأسلوبه الأخاذ …
Ny azo antoka dia tsy hahita intsony ireo asa soratra goavany aho ary ilay somba fanorany mahasarika.
Saingy tsy afaka mangataka an'Andriamanitra hitahy ny fanahin'olona iray niteny tany aloha tany fa hoa Andriamanitra sy Jesosy dia nanao firaisana ara-nofo.
Ary farany, Laila, nanoro hevitra an'i Ahmed mba tsy hamela mandalo fotsiny ny fotoana ahafahany mamaky ireo tantara voasoratr'i Saramago:
أنصحك يا أحمد ، بألا تفوت قراءة ( العمى ) ، رواية تشعرك بالواقعية ، تشعرك بأهمية العينين ، مازلت إلى اليوم أخشى احساس فقد البصر فجأة في مكان ما
Ny toro-hevitro aminao ry Ahmed, dia aza avela handalo fotsiny ny vintana mety hahafahanao mamaky ny “Blindness“. Tena tantara milaza ny zava-misy io izay manome lanja ny fampiasana ny masonao. Hatramin'ny anio dia matahotra foana ny mety ho fahaverezan'ny fahitako tampoka aho.